“Lafa dhugaan hin jirre nagaan hin jiru-Dr. Gammachuu Magarsaa. – Kichuu
HomeAfaan OromooNews“Lafa dhugaan hin jirre nagaan hin jiru-Dr. Gammachuu Magarsaa.
“Lafa dhugaan hin jirre nagaan hin jiru-Dr. Gammachuu Magarsaa.
“Lafa dhugaan hin jirre nagaan hin jiru, warri nagaa barbaadan dura dhugaa abbaadhaaf galchuu qabu.
Oromiyaa irratti abbaan dhugaa Oromoodha. Kana quba qabaadhaa.”
Dr. Gammachuu Magarsaa
Dubbisaa isin Fayyadaa!
Haalli jiru Maal fakkaata?
1. Muummichi Ministeeraa dhukkubsatee du’aaf jireenya gidduu jira Kan jedhu Soba. Garuu ammoo Gama Siyaasatiin Muummichi ministeeraa rakkoo hamaa keessa jira. Itti Aanan Muummicha Ministeeraa harka wayaa jalaatin Paartii ABIN irratti gurmeessee mataa dhukkubbii guddaa ta’eera.
Maaltu rakkoo fide??
1. Biltsiginnaan Amaaraa mootummaa garagalchinee Aangoo federaalaa dhuunfachuun waan hunda rukunnee bulchina jedhanii hojjechaa jiru.
2. Biltsiginnaan Amaaraf ABIN gahee hojii waliif laataniiru. ABIN Siyaasa akka gaggeessu fi Iccitii mootummaa takkaa lamaan aduu akka dhoofsisu waliigalaniiru.
3. Paartin ABIN Falaashota Biyya Israa’el fayyadamuun Seenaataroota Ameerikaa ifaan ifatti of jala galchuuf bajanni gahaan ramadameefira. Kanaaf ammoo Paartin ABIN yeroo adda addaatti falaashota itoophiyaan biyya teenyaa miti jedhanii gara Israa’el deeman madda galii godhatanii yeroo adda addaa mariisisaa turuun ni yaadatama.
4. Laqoo Ayyaalew (Itti gaafatamaan waajjira galii federaalaa) abbootii qabeenyaa paartii ABIN deeggaran relief akka argataniif maallaqaan Paartii ABIN akka deeggaran gahee hojii isaa fudhatee jira.
5. Finfinnee irratti Paartii baaldaraas jedhamu adda durummaan Gama hundaan Cimsuun finfinnee akka dhuunfatan bal’inaan hojjetamaa jira.
6. Abbootii amantaa (phaaphaasotaaf Qeesonni) adda durummaan iddoo gahanitti hojii qo’annoo Siyaasaa akka hojjetan waliigaltee irra gahanii jiru. Iddoo kanatti Kan amanuuf Nama rakkisu waan ajaa’ibaatitu jira.
7. Miidiyaalee biyyoota keessaf hayyoota biyya alaa Kan finxaaleyyii Amaaraa ta’an Yohaannis Booyaalew akka qindeessu murtaa’uf jira.
8. Rakkoon yoo Kan dhalatu ta’e Finfinneef naannawa finfinnee tasgabbeessuf abbootin amantaa Amaaraa akka tasgabbeessan yaadaa jiru.
9. Gama danda’ame hundaan Aangoo Dr.Abiyyi harkaa fuunee of harkatti galfanna jechaa jiru. Taatu harkaa bunnee yoo didde huunee yaada jedhu qabu.
10. Ministeeronni Biltsiginnaa Amaaraa hundi isaanii namoota isaanii akka iddoo iddoo qabsiisan Ergamni Cimaan kennameefira.
Maalif Kana Yaadan??
Wanta isaan yaadan qabxii 10 tarreessera. Akka isaan yaadanitti Haalli qorannoo isaanii:
1. Dr.Abiyyiif Lammaa Magarsaa Siyaasan walii galuu dhabuun isaanii nuuf carraan Kuni handaaqqoo warqee buustun walfakkaata jedhu. Akka Yaada kanaatti Lammaa Magarsaa osoo gara Paartii Biltsiginnaatti nan deebi’a jedhee kan isaan mormuufii arrabsoo guddaa irraan gahu Biltsiginnaa Amaaraf Hayyoota Amaaraa ta’uu danda’a.
2. Jawaar Mohammed , Baqqalaa Garbaa, Abdii Raggaasaa, gaggeessitoota ABO fi KFO hunda, Hamzaa Booranaa, Koloneel Gammachuu Ayyaanaa fi kkf mana hidhaatii bahan taanan nuti humna dhabna, kaayyoo keenyas osoo galmaan hin gahin Ergamtuu taanee hafna waan ta’eef Yeroon teenya osoo jarri kuni mana hidhaatii hin bahini jedhanii qo’annoo gaggeessan. Dubbiin Yeroon amma jettu tuni harkaa milqxe malee waan Callisanii dubbatanii miti.
3. Mootummaan federaalaa Lola Tigraay keessatti gaggeeffamaa jiruun hudhamee waan jiruuf humna ittiin ofirraa nudhorku hin qabu Kanarra darbeetis yeroo ammaa kanatti naannoo Amaaraa muufachiisuu hin barbaadu jedhanii yaadu.
4. Lolli naannoo Tigraay yoo Olaantummaa Mootummaa federaalatiin Xumuurame ta’e Mootummaan federaalaa Dr.Abiyyiin gaggeeffame humna argata waan ta’eef kaayyoo barbaanne galmaan gahuu hin dandeenyu, Akkuma kanaan dura wayyaanen waggaa 27 nu Ergatte ammas Ergamtuu ta’uuf deemna. Kanaaf osoo hin dursamin dursuu qabna jedhanii qorannoo haalaa gaggeessan. Yeroo ammaa kanatti Tigraayi burkutoofterti jedhanii teechifataniiru.
5. Mootummaan federaalaa yeroo ammaa kanatti Ummata Oromoo fi hayyoota Oromoo waliin Afaan jala walbahee jira waan ta’eef deeggarsa hin qabu jedha haalli qo’annoo isaanii. Kanaaf keessi isaanii yeroon amma jedheenii jira.
6. Paartiilen Siyaasa Oromoo gaggeessan hidhamuun nuuf Carraa gaarii (golden Opportunity) Dr.Abiyyiif idaa guddaadha jedhanii haala teechifatan.
7. Lola amma Tigraay Keessatti gaggeeffameen Meeshaa Waraanaa waan arganneef of Kabachiisuu dandeeenya jedha qo’annoon Haala isaanii. Kanarraa ka’anii ariifannaa addaa keessa waan Galan fakkaata.
8. Olaantummaa Piroopagaandaa Miidiyaa waan qabnuuf waan hunda too’achuu dandeenya jedhanii murteeffataniiru.
9. Miseensonni Paartii Biltsiginnaa Oromiyaa Sadarkaa Federaalatti ramadaman baay’en isaanii waa’ee federaalaa hin beekan waan ta’eef Osoo isaan waajjira gaggeessuf itti muudaman hin barin Laamshessuun hojii hojjenna jedhanii yaadu. Iddoo tanattis bal’inaan ittin deebi’a.
10. Finfinnee irratti Olaantummaa qabna waan ta’eef Siyaasa Itoophiyaa akka barbaannetti Ofuu (Set) gochuu dandeenya jedhanii haala jiru qorataniiru.
11. Abbootin qabeenyaa Oromoo ta’an Paartiilee mormituus ta’ee akitivistoota Oromoo Maallaqaan hin deeggaran waan ta’eef Olaantummaa Maallaqaatin haala jiru jijjiiruu dandeenya jedhanii ofitti amananii jiru